Pixel 4 ga - achọpụta ihe mberede ụgbọ ala ma kpọọ ụlọ mberede | Gam akporosis
Google Pixel 4 ga - achọpụta ihe mberede ụgbọ ala ma kpọọ gị XNUMX
Mgbe ụfọdụ, teknụzụ na-akarị ngwa ngwa na ọ bụ bulie ekwentị mgbe ụgbọ ala ọzọ kụrụ gị ịkpọ na ekwentị. Google Pixel 4 ga - achọpụta ihe ọghọm wee kpọọ XNUMX maka gị.
Ọ dịlarị na Mee mgbe anyị matara ọrụ ahụ «Auto na-akwụsị ihe mberede ụgbọ ala»For Pixels on Android 10. Ekele dịrị onye nrụpụta, anyị amụtala na ngwa ozi ihe mberede enwetala mmelite nke degharịrị aha ya“ Nchedo Onwe Onye ”.
una nkọwa soro usoro nseta ihuenyo na nke ahụ na-egosi otú ngwa ahụ ga-esi nwee ike ịchọpụta ihe mberede ụgbọ ala ịkpọ nọmba mberede ozugbo.
N'oge ahụ ọ dị ka ihe puru iche nke Pixel 4 nakwa na ọ ga-adị na United States. Dịkarịa ala maka ugbu a. Ọrụ a na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú a na, mgbe achọpụtara ihe mberede, ekwentị ahụ ga-ama jijiji ma kpọọ mkpu na oke kacha elu. Oti mkpu a bụ maka “ịjụ” anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ enyemaka.
Ọ bụrụ na emeghị mkpu ahụ, ngwa ga-akpaghị aka lekọta akpọ mberede iji nye ebe ihe mberede ahụ mere ka arụ ọrụ mberede wee rụọ ọrụ. Iji chọpụta ihe mberede ahụ, ọ na-eji ọnọdụ, ihe mmetụta ngagharị na ụda olu.
Ngwa ahụ n'onwe ya dọrọ aka na ntị na enwere ike ịnwe nkwupụta ụgha na ihe adịghị mma, yabụ ọ bụrụ na ị na-ejikarị ụgbọ ala eme asọmpi na mgbakọ, tụrụ aro mbụ Nke a atụmatụ nwere nkwarụ.
Ọ bụrụ na anyị lelee ngwa ahụ na Storelọ Ahịa Play, anyị nwere ike ịmata nke ahụ anyị nwere ike tinye ozi metụtara akụkọ gbasara ahụike anyị ma họrọ ndị kọntaktị ihe mberede ka akpọọ gị. Enwere ike ịkekọrịta ihe mberede ahụ na obere ozi na-egosi ọnọdụ dị ugbu a na ndị akpọtụrụ kọntaktị mberede ahụ; a Pixel nke anyị nwere ike ibudata akwụkwọ ahụ aja.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Pixel 4 ga - achọpụta ihe mberede ụgbọ ala ma kpọọ gị XNUMX
Esi kpochapụ data ịkọwapụta amamịghe na gam akporo 10
Oku ọrụ dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play